करदाताको गुनासो– कर्मचारीको व्यवहारमा परिवर्तन भएन « Anumodan National Daily
करदाताको गुनासो– कर्मचारीको व्यवहारमा परिवर्तन भएन
प्रकाशित मिति : २३ फाल्गुन २०७६, शुक्रबार १३:०५
धनगढी । धनगढी सुदूरपश्चिम प्रदेशको अस्थायी राजधानी मात्रै होइन वर्षोदेखि यस क्षेत्रको प्रमुख व्यापारी केन्द्रका रुपमा स्थापित छ । प्रमुख व्यापारिक नाका भएका कारण धनगढी सहित कैलालीमा प्रशस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान छन् । उद्योग, कलकारखाना छन् । अझ, अहिले पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशका चार जिल्लाका करदाताले कर तिर्न धनगढी नै धाउनुपर्ने बाध्यता छ ।
धनगढीमा रहेको आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा कर तिर्न आउने प्रायः करदाताको एउटै गुनासो हुने गर्छ– देशमा जुनसुकै शासन आए पनि कर्मचारीको व्यवहारमा कुनै परिवर्तन भएन ।
करदाता मात्रै होइनन् लेखापरीक्षकको अनु्भव पनि तितो नै रहेको छ । धनगढीका एक जना लेखापरिक्षकको शव्दमा ः कर तिर्न जाने प्रायः सेवाग्राहीको गुनासो हुन्छ– किन कर कार्यालयका कर्मचारीहरुले हामीलाई जरिवाना तिर्न आएका अभियुक्त वा अपराधीलाई जस्तो व्यवहार गर्छन् ?
बाख्रापालन सम्बन्धी फर्मको पान नम्बर लिन कर कार्यालय आएका कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिका वडा नम्बर १० का उद्धवसिंह धामी भन्नुहुन्छ– कुनै कुरा सोध्यो भने कर्मचारी बोल्दैनन् । कर्मचारीले कुनै उपाय नबताएपछि मैले बाध्य भएर आन्तरिक राजश्व कार्यालयको पर्खाल बाहिर रहेका कर सम्वन्धी लेखापडी गर्ने व्यक्तिको सहारा लिएर काम गरे ।
आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा कर तिर्न वा पान नम्बर लिन अथवा कुनै पनि कामविशेषले आउने प्रायः सेवाग्राहीको अनुभवमा– कर्मचारीहरूले सेवाग्राहीसंग बोल्नुपर्दा पैसा पर्छ झैं गर्छन् । कैलालीको कैलारी गाउँपालिका, रतनपुरका रमेश चौधरीले भन्नुभयो– हामी करदातालाई कर्मचारीले उचित सम्मान सहितको सेवा दिनु पर्ने होइन र ? हामीले बुझाएको करले राज्य सञ्चालन हुन्छ । हाम्रै करबाट तलब र सेवासुविधा पाउछन् ।
गौरीगंगा नगरपालिकाका लक्षीराम आचार्य आन्तरिक राजश्व कार्यालयले कर बेस्सरी लिने, तर सेवा सुविधा दिन कन्जुस्याई गर्ने गरेको अनुभव सुनाउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो– अब कर तिर्ने व्यवस्था स्थानीय तहमै हुनुपर्दछ । यहाँ (आन्तरिक राजश्व कार्यालय) आएर घण्टौ लाइन लगाएर हामी सेवाग्राहीको समय बर्बाद गराउन पाइँदैन ।
उहाँले स्थानीय तहमै कर तिर्ने व्यवस्था गर्न नसकिए भ्याट, पान, करचुक्ताका अलगअलग डेस्क बनाएर छिटो छरितो सेवादिने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
कैलालीको आन्तरिक राजश्व कार्यालयका कर्मचारीहरुका लागि दिउँसोको खाजाखाने समय एक घण्टा तोकिएको छ । तर, कुनै पनि दिन कम्तिमा डेढ घन्टाअघि कोही पनि कार्यालयमा फर्किदैनन् । “हामी करदाता तीन÷चार दिन खर्च गरेर यहाँ सेवा लिन आउछौ, तर कर्मचारीहरुले खाजा खाने नाममा घन्टौं समय विताउने गरेका छन्” डोटीको जोरायल गाउँपालकास्थित शिव सामुदायिक वन समुहका अध्यक्ष गौरीलाल छेडाल भन्नुहुन्छ– कर्मचारीले करदाता कति टाढाबाट सेवा लिन आएका हुन्, कति सास्ती भोगे होलान् ? भन्ने कहिल्यै पनि सोच्दैनन् । छेडालले कर बुझाउन तीन दिन समय लागेको बताउनु भयो ।
आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा प्रायः पुस, चैत र असार महिनामा सेवाग्राहीको ठूलो भिड लाग्ने गर्दछ । कर सम्बन्धी कुनै पनि सेवा लिन घन्टौ. लाइन लाग्नुपर्ने बाध्यता यथावत छ । सेवाग्राहीको गुनासो छ– गर्मी र जाडोयाममा त जसोतसो लाइन लाग्छौं, तर वर्षायाममा ओत लाग्ने ठाउँ समेत नभएकाले भिजेर लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ ।
ठूलो भीड भएर सेवा लिन कठिनाइ हुने भएकै कारण केही सेवाग्राही सजिलो दिन रोजेर सेवा लिन समेत आउने गरेका छन् । गोदावरी नगरपालिकाका भानसिंह ठगुन्नाले थरुहटले आह्वान गरेको दुई दिने आम हडतालको अवसर पारेर आफूले छ महिनापछि बुधबार (फागुन २१ गते) करचुक्ता प्रमाणपत्र लिएको बताउनुभयो । पश्चिम तराईका पाँच जिल्लामा थरुहटले मंगलबार र बुधबार दुई बन्द ÷हडताल घोषणा गरेको थियो ।
आन्तरिक राजश्व कार्यालय, धनगढीमा सेवा लिन आउने प्रायः सेवाग्राहीको अर्को पनि तितो अनुभव छ । उहाँँहरुका अनुसार विचौलियाहरुले चाडो काम गर्न र कर विवरण मिलाउन कर्मचारीका नाममा सेवाग्राहीहरुसंग रकम लिने गरिरहेका छन् ।
आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा सेवाग्राहीले सेवा लिन आउँदा कार्यालयमा इन्टरनेटको समस्या, खाजाका लागि भन्दै कर्मचारीहरु बढि समय कार्यालयमा नआउने लगायतका कारण सास्ती भोगिरहेका छन् नै, कहिलेकाही कप्युटरमा विवरण इन्ट्री गर्दा कही गलत भइहाल्यो भने सुधार गर्न निकै कठिनाइ भोग्नुपरिरहेको छ ।
आन्तरिक राजश्व कार्यालय, धनगढीमा सेवा लिन आएका प्रायः सबै सेवाग्राहीले करशिक्षा आवश्यक रहेको बताए ।
सधैं झंझट बेहोर्नुपर्ने भए पनि आन्तरिक राजश्व कार्यालय धनगढीमा हरेक वर्ष करदाताको संख्या थपिने गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालू आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को आठ महिनामा ५० हजार नयाँ करदाता थपिएका छन् । आन्तरिक राजश्व कार्यालय, धनगढीका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा ८६ हजार ६५५ करदाता रहेकोमा चालू आर्थिक वर्ष करदाताको संख्या एक लाख ३५ हजार ७९१ पुगेको छ ।
करदाता बढेसंगै राजश्वमा पनि बृद्धि हुँदै गएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा आन्तरिक राजश्व कार्यालय, धनगढीले तीन अर्व ७२ करोड छ लाख २७ हजार रुपैया राजश्व संकलन गरेकोमा चालू आर्थिक वर्षको माघ महिनासम्म दुई अर्ब ६७ करोड पाँच लाख ७४ हजार रुपैयाँ संकलन गरे.को जनाएको छ । गत आर्थिक वर्षको माघ महिनासम्म एक अर्व ९९ करोड ७० लाख ३१ हजार रुपियाँ राजश्व संकलन भएको थियो । चालू आर्थिक वर्ष राजश्व संकलनको लक्ष्य पनि बढाइएको छ । आन्तरिक राजश्व कार्यालय, धनगढीका अनुसार गत आर्थिक वर्षको तुलानामा चालू आर्थिक वर्षमा ३८.६५ प्रतिशतले राजश्व संकलनको लक्ष्य बृद्धि गरेर पाँच अर्व १५ करोड ८७ लाख ३७ हजार रुपियाँ पु¥याइएको छ ।
प्रमुख कर अधिकृतको भनाइ
आन्तरिक राजश्व कार्यालय, धनगढीका प्रमुख कर अधिकृत चन्द्रकुमार श्रेष्ठले सेवाग्राहीलाई भीडभाडले सेवा छिटोछरितो हुन नसकेको स्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै पहाडी जिल्ला अछामको साँफेवगर र डोटीमा कर कार्यालय खोल्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार कैलालीको लम्कीमा पनि आन्तरिक राजश्व कार्यालय खुलीसकेको छ ।
प्रमुख कर अधिकृत श्रेष्ठले विगतको तुलनामा सेवा प्रवाह प्रक्रिया सहज र छिटोछरितो बनाउने प्रबन्ध गरिएको बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो– पहिले फाँटफाँटमा फाइल लगेर जानुपर्दथ्यो, केही महिनायता अहिले फाइल आफै घुमेर सेवागाह्री उभिएको ठाउँमा आउछ । बैंक पनि कार्यालय परिसरमै छ । कम्प्युटरमा कथंकदाचित गलत विवरण इन्ट्री भएमा एक महिनामै सच्चाउनुपर्छ । त्यो प्रक्रिया कठिन छैन ।
उहाँले सेवाग्राहीको बढि भीड हुने असार, पुस र चैत महिनामा बढि कर्मचारी परिचालन गरेर छिटो छरितो सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाइएको बताउनु भषे ।
उहाँले बोलीबचनका विषयमा सेवाग्राहीबाट गुनासो आएपछि त्यस्ता कर्मचारीलाई बोलाएरै व्यवहार परिवर्तन गर्न लगाएको दावी समेत गर्नुभयो । प्रमुख कर अधिकृत श्रेष्ठले भन्नुभयो– हामीले सेवा, सुविधा र व्यवहारमा निक्कै सुधार ल्याएका छौ, तर कतिपयले पुरानै कुरा सम्झेर टिप्पणी गरिरहनु भएको होला ।